Oge 2021 Alibaba Live Broadcast
Live Time Main Contents Hosts QR Code Live on Alibaba 14:00 pm, March 4th (CST) Eco Vent Pro Plus Energy Saving Ventilation na PPE Products Production Cleanroom Service Tom, Andrew https: //activity.ali ...
Uru na ọghọm: Mgbidi dị ọcha na nke ọdịnala
site ha na 21-01-22
Abia na imepụta ebe mkpocha ohuru, nke kachasi, ma nwekwaa mkpebi mbu ị g’eme bu ma ulo mkpocha gi a gha’’oru ma o bu omenala. Enwere uru na mmachi na nke ọ bụla n'ime nhọrọ ndị a, ọ nwere ike isi ike igbochi ...
Ma eleghị anya, ị nwere ihe nfụkasị ahụ. Ma eleghị anya, ị nwetara otu ọtụtụ push pushma Ọkwa banyere ikuku àgwà na mpaghara gị. Eleghị anya ị nụrụ ya nwere ike inye aka gbochie mgbasa nke COVID-19. N'agbanyeghị ihe kpatara gị, ị na-atụle ị nweta ihe nhicha ikuku, mana n'ime ala, ị nweghị ike inye aka ...
AHU eriri igwe Winter Protection Nduzi
Ejirila mmiri iji kpoo ma kpoo ikuku na ikpo ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmalite nke ikpo ọkụ na ikuku oyi. Ikpokọta nke mmiri mmiri na nsonaazụ eriri igwe na-esikwa na otu ogologo oge. Ọ bụ a systematic nsogbu na ...
8 Ga-ezere Nhichapụ Ventilation Nwụnye Mmehie
Usoro ikuku ventilation bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa na usoro Cleanroom na usoro ihe owuwu. Usoro ntinye sistemụ nwere mmetụta na-arụ ọrụ na gburugburu ụlọ nyocha yana ọrụ nhicha na arụmọrụ. Ngafe ...
Ajụjụ a na-ajụkarị PCR Labs (Nkebi B)
N'oge a ọtụtụ ugbu a Covid-19 ule ugbu a na akụkọ niile na-abịa site na iji PCR. Nnukwu mmụba nke ule PCR na-eme ka ụlọ ọrụ PCR bụrụ isiokwu dị ọkụ na ụlọ ọrụ nhicha. Na Airwoods, anyị na-ahụkwa mmụba dị ukwuu nke PCR lab inq ...
Ajụjụ PCR Labs na-ajụkarị (Nkebi A)
Ọ bụrụ na ịmepụta ọgwụ mgbochi bụ ogologo egwuregwu na ọgụ megide coronavirus, nyocha dị mma bụ obere egwuregwu dị ka ndị dọkịta na ndị ọrụ ahụike ọha na-achọ igbochi njirisi nke ọrịa. Na akụkụ dị iche iche nke mba ahụ ịmaliteghachi ụlọ ahịa na servi ...
Kedu ihe bụ isi nke nhazi ụlọ ọcha?
A na-eji ụlọ mposi na ụlọ ọrụ ọ bụla ebe obere ihe nwere ike igbochi usoro nrụpụta. Site na mmepe ngwa ngwa nke akụ na ụba mmadụ, ọkachasị nyocha sayensị na teknụzụ ọgbara ọhụrụ ...
Etu esi ebu ngwaahịa dị ọcha n'ime akpa ibu
Ọ bụ n'ọnwa Julaị, onye ahịa zitere anyị nkwekọrịta ahụ, iji zụta paneli na profaịlụ aluminom maka ọfịs ha na-abịanụ na ọrụ ime ụlọ oyi. Maka ọfịs ha, ha họpụtara iko achịcha magnesium, iko nke 50mm. Ihe omuma a bu ihe bara uru, oku ...
Ihe omume 2020-2021 HVAC
A na-eme ihe omume HVAC na ọnọdụ dị iche iche gburugburu ụwa iji gbaa nzukọ nke ndị na-ere ahịa na ndị ahịa ume yana iji gosipụta teknụzụ kachasị ọhụrụ n'ọhịa nke ikpo ọkụ, ikuku, ikuku oyi na friji. Nnukwu ihe omume iji lelee anya ...
Dos na Dont maka Ule Ule
Detezọ nchọpụta nke mkpụrụ ndụ nwere ikike iji mepụta nnukwu nucleic acid site na mmụba nke ọnụọgụ akara nke achọtara na ihe atụ. Ọ bụ ezie na nke a bara uru iji mee ka nchọpụta nwere mmetụta ọsọ ọsọ, ọ na-ewebata nke ...
Ndụmọdụ Maka Officemepụta Office HVAC System
N'ihi ọrịa na-efe efe n'ụwa niile, ndị mmadụ na-elezi anya banyere iwuli elu ikuku. Ọhụrụ & ahụike nwere ike ibelata ihe ize ndụ nke ịrịa ọrịa na nje na-agafe nje n'ọtụtụ oge ọha. Iji nyere gị aka ịghọta ezigbo ikuku ikuku syste ...
Ndị ọkà mmụta sayensị gwara WHO ka ha leba anya na njikọ dị n’etiti iru mmiri na ume okuku ume
site ha na 20-05-25
Arịrịọ ọhụrụ na-akpọ Organizationtù Ahụ Ike Worldwa (WHO) ka ha mee ngwa ngwa ma nwee mkpebi siri ike iji guzobe nduzi zuru ụwa ọnụ banyere ikuku ikuku dị n'ime ụlọ, na-enye ndụmọdụ doro anya maka opekata mpe nke ikuku iru mmiri n'ụlọ ọha. Nke a dị oke egwu ga-ebelata t ...
China zigara ndị ọkachamara ahụike na Etiopia ka ha lụso Coronavirus ọgụ
site ha na 20-04-17
Otu ndị ọkachamara na-ahụ maka ọrịa na-efe efe nke China taa rutere Addis Ababa iji kesaa ahụmịhe ma kwado mbọ Etiopia iji kwụsị mgbasa nke COVID-19. Ndị otu ahụ ga - anabata ndị ọkachamara ahụike 12 ga - etinye aka na mgbasa megide mgbasa nke coronavirus ruo izu abụọ ...
Cleanroom Design na 10 Mfe Nzọụkwụ
"Mfe" nwere ike ọ gaghị abụ okwu na-abata n'uche maka imepụta gburugburu ebe ndị a chọrọ nlezianya. Agbanyeghị, nke ahụ apụtaghị na ịnweghị ike ịmepụta imepụta ụlọ ime ụlọ siri ike site na idozi esemokwu n'usoro ezi uche dị na ya. Isiokwu a kpuchiri igodo ọ bụla, ruo ala maka ngwa a kapịrị ọnụ ...
Uzo esi aga ahia HVAC n’oge oria ojoo Coronavirus
Izi ozi kwesịrị ilekwasị anya na usoro ahụike, zere imebiga ihe ókè Tinye ahịa na ndepụta nke mkpebi azụmahịa nkịtị nke na-etolite karịa ka ọnụọgụ nke ikpe coronavirus na-abawanye na mmeghachi omume na-adịwanye njọ. Ndị ọrụ ngo kwesịrị ikpebi ego ole ...
Na-eduzi ndị ahịa site na Ogo ikuku nke ime ụlọ na usoro ịchebe IAQ
Karịa mgbe ọ bụla ọzọ, ndị ahịa na-eche banyere ikuku ha Na ọrịa ọrịa iku ume nke na-achịkwa isi okwu na ụmụ mmadụ na-arịa ụkwara ume ọkụ na nfụkasị, ogo ikuku anyị na-eku ume n'ụlọ anyị na gburugburu ime ụlọ adịbeghị mkpa nye ndị ahịa ...
Nwere ike ọ bụla Manufacturer Aghọọ a ịwa ahụ nkpuchi Manufacturer?
O kwere omume na onye na - eme ụdị ngwa ahịa, dịka ụlọ ọrụ na - emepụta akwa, ka ọ bụrụ onye na - emepụta ihe nkpuchi, mana enwere ọtụtụ nsogbu imeri. Ọ bụghị usoro abalị, ebe ọ bụ na ọtụtụ ahụ na nzukọ ga-akwado ngwaahịa maka ...
Kedu ihe kpatara Enyemaka Ga-eji Wulite roomlọ Dị Ọcha? Constructionlọ nhicha, dịka ịwulite ụlọ ọrụ ọhụrụ, chọrọ imirikiti ndị ọrụ, akụkụ, ihe, yana echiche echebara echiche. Sourcing components na ileba anya maka ụlọ ọrụ ọhụụ abụghị ihe ị ga - ewere ...
Chọrọ maka Ventilation na Modern Architecture
Na mmepe nke teknụzụ ventilashion na-aga n'ihu. Ndị mmadụ na-enwe ike ịchịkwa ime ụlọ dị n'ime ụlọ ahụ ma mepụta ihu igwe ime ụlọ dị mma. Agbanyeghị, na ọnọdụ ụkọ zuru ụwa ọnụ nke ...
E gosipụtara Airwoods nke ọma na 2020 BUILDEXPO
site ha na 20-02-19
Emere 3rd BUILDEXPO na 24 - 26 February 2020 na Millennium Hall Addis Ababa, Ethiopia. Ọ bụ otu ebe isi nweta ngwaahịa, ọrụ na teknụzụ ọhụụ si n'akụkụ ụwa niile. Ndị nnọchi anya obodo, ndị nnọchi anya azụmahịa na ndị nnọchi anya si dị iche iche c ...
Nabata na AIRWOODS Booth na BUILDEXPO 2020
site ha na 20-02-04
Airwoods ga-eme na nke atọ BUILDEXPO site na 24 - 26 February (Mon, Tue, Wed), 2020 na Stand No.125A, Millennium Hall Addis Ababa, Ethiopia. Na nguzo No.125A, onweghi ihe nkpuru obula i nwere onye nwe ya, onye oru gi ma obu onye ndumodu, i nwere ike ichota ihe kacha mma HVAC equipment & cleanroom s ...
4 Kacha Common HVAC Issues & Otu esi edozi ha
site ha na 20-01-17
Nsogbu dị na arụmọrụ nke akụrụngwa gị nwere ike iduga nbelata arụmọrụ na arụmọrụ yana, ọ bụrụ na ahapụghị ya ogologo oge, ọ nwere ike ibute nsogbu ahụike. N'ọtụtụ ọnọdụ, ihe kpatara nsogbu ndị a bụ nsogbu dị mfe. Ma maka ndị na-adịghị azụ na HVAC ...
Olee otú a Chiller, Jụrụ Tower na Air Ijikwa Unit-arụkọ Ọrụ
site ha na 19-12-09
Kedu otu Chiller, Cooling Tower na Air Ijikwa Unit na-arụkọ ọrụ ọnụ iji nye ikuku (HVAC) ụlọ. N'isiokwu a, anyị ga-ekpuchi isiokwu a iji ghọta isi mmalite nke osisi HVAC. Olee otú a chiller jụrụ ụlọ elu na AHU na-arụ ọrụ ọnụ The isi usoro componen ...
Ingghọta Ike Iweghachite na Rotary Okpomọkụ Exchangers
site ha na 19-12-03
Ihe ndị dị mkpa na-emetụta ike arụmọrụ thatghọta ike mgbake na rotary okpomọkụ exchangers- Key teknụzụ ihe ndị na-emetụta ike arụmọrụ A na-ekewa usoro ikpo ọkụ ọkụ ụzọ abụọ dabere na mpaghara ọkụ nke usoro ahụ: Usoro maka mgbake ume ihe ...
AHRI na-ewepụta August 2019 US US Heating and Cooling Equipment Ship Data
site ha na 19-09-15
Obibi Nchekwa Mmiri nke Ebe Obibi US Mbupu US nke ebe nchekwa mmiri gas na-ekpo ọkụ maka Septemba 2019 mụbara .7 percent, na 330,910 nkeji, si na 328,712 nkeji zigara na September 2018. Obubata igwe eji enye mmiri ọkụ na-echekwa ebe obibi mụbara 3.3 na Septemba 2019 ruo 323, .. .
Airwoods na nkwekọrịta gị na ụlọ ọrụ Ethiopian Airlines dị ọcha
site ha na 19-06-19
Na June 18 2019, Airwoods bịanyere aka na Nkwekorita ya na ndi Ethiopian Airlines Group, iji kpoo ya ISO-8 Clean Room Construction Project nke ugbo elu Oxygen Bot overhaul Workshop. Airwoods guzobere mmekọrịta nke ya na ọdụ ụgbọ elu nke Etiopia, ọ gosipụtara n'ụzọ zuru ezu ọkachamara Airwoods na comprehensiv ...
Cleanroom Technology Market - Uto, Tredị, na amụma (2019 - 2024) Isi Market
site ha na 19-06-06
Ahịa ahịa teknụzụ dị ọcha bara uru na ijeri USD 3.68 na 2018 ma na-atụ anya iru uru nke USD 4.8 ijeri na 2024, na CAGR nke 5.1% karịa oge amụma (2019-2024). Enweela ọchịchọ na-arịwanye elu maka ngwaahịa ngwaahịa. Dị iche iche mma asambodo, dị ka ISO chec ...
Roomlọ Dị Ọcha - Atụmatụ ahụike na nchekwa maka Cleanroom
site ha na 19-05-05
Standkpụrụ zuru ụwa ọnụ na-ewusi ụlọ ọrụ ime ụlọ dị ọcha nke oge a ọkọlọtọ mba ụwa, ISO 14644, gbasara ọtụtụ teknụzụ ụlọ nhicha dị ọcha ma nwee nkwado gafee ọtụtụ mba. Ojiji nke teknụzụ dị ọcha na-enyere aka ịchịkwa mmetọ ikuku mana ọ nwekwara ike iburu ihe ndị ọzọ ...
Etu HVAC si agbanwe
site ha na 19-04-18
Ọnọdụ ala nke HVAC na-agbanwe. Nke ahụ bụ echiche pụtara ìhè na 2019 AHR Expo na Jenụwarị gara aga na Atlanta, ọ ka na-ada ụda ọnwa ole na ole. Ndị na-ahụ maka ihe owuwu ụlọ ka kwesịrị ịghọta ihe na-agbanwe n'ezie-na otu ha nwere ike isi jigide iji hụ na ha wuru ...
Ntuziaka Nkwado 2018 - Kachasị ike nchekwa nchekwa na akụkọ ihe mere eme
site ha na 19-04-17
Ngalaba Energy nke US (DOE) nke nnabata ọhụrụ, nke akọwara dị ka "ụkpụrụ nchekwa nchekwa kachasị ukwuu n'akụkọ ihe mere eme," ga-emetụta ụlọ ọrụ na-ekpo ọkụ na ụlọ ọrụ jụrụ oyi. Standardskpụrụ ọhụrụ ahụ, nke ekwuputara na 2015, ga-amalite na Jenụwarị 1, 2018 ma gbanwee ...
Ewu nke Airwoods HVAC Oversea Department New Office
site ha na 19-03-17
A na-ewu ụlọ ọrụ ọhụụ nke Airwoods HVAC na Guangzhou Tiana Technology Park. The ụlọ ebe bụ ihe dị ka 1000 square mita, tinyere ụlọ ọrụ ụlọ nzukọ, atọ nzukọ ụlọ na obere, ọkara na nnukwu size, general manager office, ajụjụ office, manager si office, mma ụlọ ...
Ahịa HVAC iji metụ Rs 20,000 Crore Mark n'aka FY16
site ha na 19-02-20
MUMBAI: A na-atụ anya na ahịa ọkụ, ikuku na ikuku oyi (HVAC) nke India ga-eto site na 30 pasent ruo ihe karịrị nde 20,000 karịa afọ abụọ na-esote, ọkachasị n'ihi mmụba nke ọrụ ihe owuwu na akụrụngwa na ngalaba ala. Hlọ ọrụ HVAC toro ihe karịrị 10,000 cro ...
Anyị na-elekọta ụlọ gị dị ọcha, onye na-eweta ihe ngwọta maka ime ụlọ dị ọcha
site ha na 19-02-14
Na-asọpụrụ ndị ahịa dị ọcha n'ime ụlọ ọrụ owuwu ụlọ nke atọ - Nnyocha ibu na mbupu tupu ezumike CNY. A ga-enyocha Panelrịrị nke ọma, ma kpochaa ya otu otu tupu ya agaa. Ejiri ogwe ọ bụla akara maka nyocha dị mfe; na ka akwakọba ya n'usoro. Ọnụọgụ ego, na zuru ezu ndepụta ...
Airwoods natara onyinye nke ọtụtụ ndị ahịa Greek
site ha na 18-12-26
Emere 2019 Greek Central Air Conditioning New Products Conference na Ememe Nleta Ndị Ahịa Kwa Afọ na Disemba 5th, 2018 na isiokwu nke Greek Innovation Technology, Artificial Intelligence Future. Airwoods, dị ka onye na-ere ahịa Greek, sonyere n'ememe a ma kwanyere ya ùgwù ...
Global Air Ijikwa Unit (AHU) Market 2018 site Nsukka, Mpaghara, Typedị na Ngwa, Amụma na 2023
site ha na 18-11-27
Global Air Ijikwa Unit (AHU) Market na-akọwapụta nkọwa zuru ezu na-ekpuchi nkọwapụta ngwaahịa, ụdị ngwaahịa, isi ụlọ ọrụ, na ngwa. Nkwupụta ahụ na-ekpuchi nkọwa bara uru nke a na-ahazi dabere na mpaghara njikwa ikuku (ahu), ndị isi egwuregwu, na ụdị ngwaahịa nke ga - pr ...
HVAC R Expo nke BIG 5 Ngosi Dubai
site ha na 18-10-27
Mmadụ Bịa na ileta ụlọ ntu anyị na HVAC R Expo nke BIG 5 Exhibition Dubai Na-achọ ikuku ikuku na ngwaahịa ikuku kacha ọhụrụ iji kwado ọrụ gị? Bịa izute AIRWOODS & HOLTOP na HVAC & R Expo nke BIG5 Exhibition, Dubai. Ugboro NO.Z4E138; Oge: 26 ruo 29 Nọvemba, 2018; A ...
Ọgwụgwọ Vocs - Amata dị ka Teknụzụ Ọgbara Ọsọ
site ha na 18-08-01
Airwoods - Onye ọsụ ụzọ gburugburu ebe obibi gburugburu ebe obibi na nchekwa gburugburu ebe obibi nke ụlọ ọrụ lithium batrị nke ikuku Airwoods - Beijing Holtop Environmental Protection Technology Co., Ltd. bụ asambodo dị ka ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ. Ọ gụnyere n'ọhịa nke nchedo gburugburu ebe obibi na akụ r ...
HVAC Asambodo Ngwaahịa CRAA nyere HOLTOP AHU
E nyere CRAA, HVAC Asambodo Ngwaahịa Anyị Kọmpat Compdị AHU Air Ijikwa Unit. Ọ na-agbala site China friji na ntụ oyi ụlọ ọrụ mkpakọrịta site nlezianya ule na ngwaahịa mma na arụmọrụ. CRAA asambodo bu ebumnobi, uzo ziri ezi na ikike ...
HVAC ieslọ ọrụ China Refrigeration HVAC & R Fair CRH2018
site ha na 18-04-12
The 29th China Refrigeration Fair ẹkenịmde ke Beijing n'oge April 9 ka 11, 2018. Airwoods HVAC Companies gara ngosi na show nke Kacha ọhụrụ ErP2018 Dabara obibi okpomọkụ ike mgbake ventilashion ngwaahịa, Kacha ọhụrụ mepụtara ductless ụdị ọhụrụ ikuku ventilators, ikuku njikwa nkeji. ..
Airwoods HVAC Systems Ngwọta Na-ebuli Nkasi Obi Maka Ọdịmma Ikuku Ime ụlọ
site ha na 17-08-27
Airwoods na-anwa kacha mma ịnye kachasị HVAC maka ịhazi gburugburu ime ụlọ maka nkasi obi. Igwe ikuku dị n'ime ụlọ bụ ezigbo okwu dị mkpa maka nlekọta mmadụ. Ọnọdụ ime ụlọ dị okpukpu abụọ ma ọ bụ ise karịa nsị karịa n'èzí, dị ka US Environmental Protect ...
HVAC Products E gosipụtara New Showroom
Ozi Ọma! Na July 2017, anyị ọhụrụ showroom e guzobere na-emeghe ka ọha na eze. E nwere HVAC ngwaahịa (Heating ventilashion Air Conditioning): azụmahịa ntụ oyi, ulo oru Central ntụ oyi, ikuku ka ikuku efere okpomọkụ exchangers, rotary okpomọkụ wheel, gburugburu ebe obibi vocs ...